ဇွန်လ 2019 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဇွန်လ 2019
နေအိမ် > ဇွန်လ 2019
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဘဝတစ်နှေးကွေးအရှိန်အဟုန်င် အကယ်. သင်ရှာနေ, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေ. ရုပ်ပုံ; လာဗင်ဒါ၏လယ်ကွက်, နေရောင်, နှင့်သံလွင်ပင်များ။ ရွာရင်ပြင်ရှိလေယာဉ်ပင်များ၏အရိပ်အောက်တွင်တနင်္ဂနွေနေ့လည်စာ,acafe creme atasidewalk cafe coupled…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သငျသညျအကြီးအအပြင်မှာတစ်ဦးကိုနှစ်သက် Are? ကျနော်တို့သစ်တောတွေပြောနေတာဖွင့်, ရေကန်များ, သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များ. တောင်တက်, စက်ဘီး, နှင့်အထွေထွေလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေကောင်းမြတ်ခြင်း. ထိုအခါဥရောပ၌အလှဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, နှင့်မည်သို့ရထားအဲဒီမှာရဖို့. လူအစုအဝေးကိုမေ့လျော့, ယင်းကမ်းခြေကိုမေ့လျော့, မေ့လိုက်…